Abavelisi beebhotile zePET-iChina iibhotile zeFektri kunye nababoneleli
Iibhotile zeplastiki ezingenanto
Iibhotile zethu zeplastikhi ezikumgangatho ophezulu zinokuphinda zisetyenziswe zinokuphinda zisebenze, zilula kwaye zinokutya. I-PET yiplastiki enembonakalo efana neglasi, efanelekileyo ekuphuculeni uluhlu lweemveliso. Inkangeleko yeglasi ecacileyo ivumela abathengi bakho ukuba babone imixholo- ke kulungile ukuba upakishe ulwelo olunomtsalane okanye into yokuthambisa.
Enkosi ngokukhanya kwayo okulula kakhulu Ibhotile yeplastiki engenanto uyilo, sesona sibonelelo sibiza iindleko kwaye sizinzileyo esifumanekayo kwintengiso. Esi sisombululo sobuvulindlela sijongana nemarike yamanzi eseleyo yeebhotile ezincinci zePET, ngakumbi abavelisi bajonge ukwandisa iindleko zabo zokupakisha kunye nemveliso.
Eyethu Iibhotile zeplastiki ezingenanto ziyafumaneka ukuthenga ngokukhetha okukhulu kokuvalwa. Oku kubandakanya zonke iintlobo zeplastiki okanye ii-aluminium caps kunye okanye ngaphandle kweeliners.
I-COPAK yaseShanghai ngumboneleli oqeqeshiweyo weephakeji zokutya ezinje Iibhotile zePET zebanga lokutya, Iikomityi zePET zebakala lokutya, izikhongozeli zokutya zeBET zokutya kunye neemveliso zePLA. Ifumaneka eShanghai, isixeko esinoqoqosho e-china, sinoluvo lwefashoniIibhotile zePET zebanga lokutya. Ukuthuthwa kwezibuko lolwandle, kunye neendlela zemveliso eziphambili.
Abathengi abaqheleneyo neTshayina banokwazi ukuba, iShanghai inowona mgangatho ungqongqo kwimveliso yeephakeji zemveliso yokutya. Inkampani evela eShanghai kwiiibhotile zokutya Ibala kufuneka libe lelona libalaseleyo. Ukusuka kwizinto ezikhethiweyo kwimveliso nakwiphakheji, yonke inkqubo igqityiwe kumasifundisane wasimahla othuli. Bonke abasebenzi bethu banxibe iminqwazi kunye neiglavu xa kusetyenzwa ngomatshini. Imigca yethu yokuvelisa ngokuzenzekelayoIibhotile zePET zebanga lokutya kwaye wenze abasebenzi bakhululeke. Oku kuqinisekisa ukuba abasebenzi banethuba elincinci lokunxibelelana neemveliso Awudingi kuba nexhala malunga nomgangatho. Kwaye kwangaxeshanye emva kokuthengisa siqinisekiso sokuqinisekisa ilungelo lakho.
Ukutya iibhotile zeplastikhi
Xa kuziwa ekufumaneni nasekuyileni Ukutya iibhotile zeplastikhi, Kubalulekile ukuba uqonde ukuba iplastikhi ithathwa njengokutya-okhuselekileyo okanye hayi. Urhulumente omninzi uvelisa imigaqo emalunga neplastikhi yokutya. ECanada, iMpilo Canada ijongene nale migaqo. E-United States, uLawulo lokuTya kunye noLawulo lweziyobisi (i-FDA) lwenza imigaqo. Nangona kunjalo, baneemfuno ezifanayo. Iplastikhi yokutya kufuneka ihlangane nemigangatho ethile yobunyulu. Ayinakuqulatha idayi, ezinye izongezo okanye iimveliso zeplastiki eziphinda zenziwe ntsha ezinokubonwa zinobungozi ebantwini. Iplastiki ekumgangatho wokutya inokuba namanqanaba emathiriyeli ehlaziyiweyo okoko nje ezo zinto zilungele izikhokelo kunye nemigaqo echazwe yiarhente yolawulo.
Ibhotile yesikwere yesiFrentshi
Eyethu Iibhotile zaseFrance ezicocekileyo Yindibaniselwano enkulu yobuhle kunye nomsebenzi. Uyilo lokonga indawo yazo luyintandokazi njengoko inganeli nje ukwandisa indawo yokugcina kodwa kunye nokukwazi ukubona imixholo kunye nelebheli. Umzimba wesikwere uvumela ukuba ezi bhotile zisebenzise ngokufanelekileyo ukuhambisa kunye nokugcina.
Iibhotile zePET French Square ineprofayili ekhethekileyo yoxande, esetyenziselwa iimveliso zokutya kunye nezinye iziqholo zebhotile. Zisoloko zisetyenziswa kwimisebenzi yobisi, kodwa zinokuba luncedo kakhulu ekugcineni olunye ulwelo olunje ngokugxila, iisiraphu, kunye neesosi kunye nezinto eziqinileyo ezinje ngemixube ye-DIY, iirubs kunye neziqholo. Baza kwenza iiphakheji ezigqwesileyo zesipho ngokunjalo.
Inkqubo ye- IsiFrentshi siplastiki eyothusayo bintlanzi ukusuka kwiCOPAK yindlela entle yokubonisa iijusi zakho, i-smoothies, i-lemonades, ii-coffees ezinomkhenkce, kunye nezinye iziselo ezihlaziyayo! Isikwere saseFransi sithetha ngebhotile enomzimba wesikwere kunye negxalaba le-Oblique. Ezi zinto zahlukileyo ngokobude, uyilo lwevolumu, ububanzi kunye noyilo lwekepusi.
I-OEM imele ukuveliswa kwezixhobo zoqobo kunye ne-ODM imele iMveliso yoYilo yoqobo. Oku kuchaziwe kwaye ekugqibeleni kuphawulwe yenye inkampani ethengisa. Ezo nkampani zivumela inkampani yophawu ukuba ivelise ngaphandle kokuzibandakanya nombutho okanye ukusebenza komzi-mveliso. Ezi zisetyenziswa kakhulu kwiiphakheji zokutya, izinto zokuthambisa, ukhathalelo lomntu, amayeza kunye nokunye okuninzi.
Singumenzi wobuchule kwiibhotile ze-PET kunye neekomityi zeephakeji zokutya. Iibhotile ze-PET kunye neekomityi zinokusetyenziselwa iziselo kunye nejusi. Ikofu, i-ayisi khrim, iti, ubisi, ubisi, ubisi, i-smoothies kunye nezinye iziselo zinokupakishwa. Zidla ngokusetyenziswa kwimivalo, iivenkile zokutya okukhawulezayo, iivenkile ze-smoothie njalo njalo. Kwaye sisebenzisane ngempumeleloIbhotile ye-PET / ye-ODM ngamatyathanga amaninzi okanye iivenkile ezinje nge-STARBUCKS, KFC, BLUEFROG, MC njalo njalo.
I-Polyethylene terephthalate, okanye i-PET, sisixhobo esisetyenziswa kwinkqubo yokwenza iintlobo ezininzi zeebhotile zeplastiki. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iibhotile zesiselo se-PET azifani ne-BPA (bishenol-A).
Iibhotile zesiselo sePET nikezela ngokugqitywa okucacileyo, okungasasazeki kwaye kuyomelela ngokukrwela okuphezulu kunye nokumelana okuphezulu. Iplastiki ye-polyethylene terephthalate ihlala isetyenziselwa ukutya kunye neebhotile zesiselo njengoko kunzima kwaye kunzima ukukhanya. Ibhotile ecacileyo yePET iya kubonisa imveliso yakho ngokubalaseleyo,
Ukuba ukwisiselo sotywala okanye sejusi, Iibhotile zesiselo sePET eChina lukhetho lwakho lokuqala. Kwaye phakathi kwabathengisi beebhotile zePET eChina, iCOPAK iya kuba yeyona nto unokuyithemba.
Shanghai COPAK Icandelo loShishino Co., LTD. Isifinyezo "COPAK".
I-COPAK ngumenzi wobuchule kwiikomityi ze-PET KUNYE Iibhotile zesiselo sePET eChina. Sele sikule ntsimi kumashumi eminyaka, sityebeh amava in ukuvelisa iiphakheji zenqanaba lokutya. Sineendibano zocweyo zasimahla zothuli kunye neebhotile.
Ukuba ngumenzi webhotile othembekileyo, uCOPAK uhlala esenza konke okusemandleni ethu ukuzalisekisa izicelo ezivela kubaxumi bethu.
Sinikezela ngomgangatho ophezulu Iitoti zesiselo se-PET ezo zenziwe ngezinto ezomeleleyo ukuqinisekisa ukoneliseka kubaxumi bethu
COPAK'S Iitoti zesiselo se-PET zenziwe ngeebhotile zePET kunye neAluminiyam ezilula ezivaliweyo; umthamo uvela kwi-6oz-20oz.
Zombini ziyabonakala kwaye zishicilelwe okanye isitikha Iinkonkxa zotywala ziyafumaneka. Sineqela loyilo ngaphezulu kwefashoni ekukhethiweyo kwakho. Imveliso yesiqhelo ikwaxhaswa.
Isiselo sePET izikhongozeli zilula, azinakuqhekeka kwaye, ngenxa yezi zibonelelo, zisetyenziswa kakhulu.
Isikhongozeli se-COPAK se-PET senzelwe ikakhulu iziselo ezinje ngamanzi okusela, ubisi, ikofu, iti, iSmoothie, ijusi kunye neziselo. Sinezikhongozeli zesiselo sePET ezicacileyo kunye nezikhongozeli zesiselo sePET esishicilelweyo. Iibhotile ze-PET zesilinda, iibhotile zePET zesikwere, iibhotile zeebhere zobusi, IINQWELO ZOBUCHULE, IINQWELO ZOKUQHAQHA IIPET, iibhotile zePET Boston njalo njalo.
Zonke iiCOPAK'S Isiselo sePET izikhongozeli zenziwe kwiworkshop yasimahla enothuli kwaye ziyahlangabezana namanqanaba emigangatho yokutya yamazwe aphesheya. Singumvelisi onokuthenjwa kwaye sinenkqubo yenkonzo ye-aftersales egqibeleleyo. Zonke izikhalazo zakho ziya kusonjululwa.
The I-PET iibhotile lukhetho olukhulu lwezinto zokucoca, iikhemikhali zekhaya, ioyile yokuthambisa, izinto zokuthambisa, impilo kunye neemveliso zobuhle, i-confectionery, iioyile / iisosi ezityiwayo kunye nokunye. Kwaye inokuvumela ubuhle bemveliso yakho bubonakalise.
Umgangatho wethu ophezulu, iibhotile zeplastiki ezicacileyo zinokuphinda zisebenze ngokutsha, zilula kwaye zinokutya okuvunyiweyo. I-PET yiplastiki enembonakalo efana neglasi, efanelekileyo ekuphuculeni uluhlu lweemveliso. Inkangeleko yeglasi ecacileyo ivumela abathengi bakho ukuba babone imixholo- ke kulungile ukuba upakishe ulwelo olunomtsalane okanye into yokuthambisa.
Njengoko Umenzi webhotile ye-PET e-china, Yonke inkqubo yethu yemveliso ihlangabezana nemigaqo yebanga lokutya laseChina. Kwaye siqinisekisiwe nge-ISO 9001: Inkqubo ye-2015 yoLawulo loMgangatho, i-FDA yokuthumela ngaphandle e-USA. Kwaye waphumelela isiQinisekiso seNkqubo yoKhuseleko loKutya ukuze uqhubeke phambili neemfuno zangoku zeemarike kunye neendlela zokwenza izisombululo zokupakisha ezisemgangathweni eziveliswe phantsi kwemo yezempilo.